AKHRISO+CADEYN: Dokumenti cadeynaya Musuq Maasuqa iyo ku takri falka Awooda Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng: Yariisow – War La Helaa Talo La Helaa
Villa Soomaaliya oo bilowday inay kiciso caada qaateyaal beesha Muddullood u dhashay
Sawirro: Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Somalia oo la kulmay dhigiisa dalka…
DHAGEYSO: Laftagareen oo xilalkii ka qaadey Wasiiro kuwo kalena Magacaabey
XOG: Fahad Yaasiin oo ku guul dareystay inuu joojiyo shirkii Beesha Mudulood oo loo…
DEG DEG+FIIRSO: Shirqoolka loo dhigay CC Shakuur,Go’aanka Farmaajo ee…
DEG DEG+FIIRSO: Dagaalka DF & J.land,Halista Saudiga & Turkiga,Hubka culus…
DEG DEG: Qaraxyo & dagaal ka dhacay Kismaayo,Hoobiyaal ku socda Muqdisho &…
DEG DEG+FIIRSO: Sababta xilka looga qaadayo Cumar Filish,Go’aanka Kheyre&…
DF oo Muqdisho ka bilowday baahinta qorshe hirgelintiisa shaki la geliyay (La soco…
Laba Cali iyo Salaad Cali Jeele oo Warkooda la Waayay
XOG CUSUB: hoos u dhac aan caadi ahayn oo markii ugu horeysay ku socda ganacsiga…
AKHRISO+CADEYN: Dokumenti cadeynaya Musuq Maasuqa iyo ku takri falka Awooda Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng: Yariisow
By Xuseen Madoobe	 Last updated Nov 26, 2018
Dhawaan ayaa hanti Dhowrka Qaranka Maxamed Afgooye uu u diray qoraal Gudoomiyaha Baarlamaanka kaas oo ku sheegay in ayan jirin wax wada tashi ah oo kala dhexeeyay Gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka isla markaana uusan jirin xiriir toos ah oo wada tashi ah.
Hadaba waxa jira cadeeymo muujinaya in Hanti Dhowrka Qaranka uu si joogta ula xiriirayay Gudiga Maaliyadda ee Baarkamaka. Qoraal uu soo saaaray Hanti Dhowrka Qaranka bishii Noveenbar 17 keedii ayuu ku waragaliyay Gudiga Maaliyadda ee Baarkamanka musuq-maasuq ka jira Gobolka Banadir iyo in loo baahan yahay in lagu sameeyo dabagal lana baaro musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Gobolka Banaadir.
Musuq-maasuqa iyo xatooyada maamulka gobolka Banaadir ayaa maraya heer ay u muuqato in Yariisow uu xilkiisa ku weyn doono, waxaana lacagta maqan ay tahay mid ka badan tan gobolka uu xisaab xirka ku sameeyey.
Hanti Dhowrk Qaranka ayaa ah shaqsi uu keensaday R/W Kheyre inta badan ku shaqeeya rabitaankiisa.
Waxaa jira macluumad dheeri ah iyo caddeeymo aan helnay. Xogaha aan helnay ayaa waxaa ka mid ah sida loo dhacay lacagta maqan iyo cidda ay ku maqan tahay. Caddeeymaha ayaa isugu jira jeegag ay qoreen madaxda ugu sarreeysa dowladda kuwaaso loo qoray shaqsiyaad ay isku hayb yihiin madaxda dalka.
Halkaan ka aqriso qoraalka uu soo qoray Hanti Dhowrka Qaranka:
Ururka NUSOJ iyo Waalidiinta Wariye Nuur Ismaaciil Sheekh oo Dowladda ka dalbaday in la siiyo daayo Wariyaha oo Muqdisho ku xiran
FIIRSO: Qaabkee ayey u dhaceen Qaraxyadii Gaalkacyo ka dhacay ee lagu dilay Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi Yare?
Xuseen Madoobe	 Feb 15, 2020 0
DEG DEG: Halis ka taagan Doorashada Galmudug,Shariif oo dhaartay,Ahlu…
DEG DEG+FIIRSO: Erdogan oo sirculus ka shifay Farmaajo,Waare oo…
FIIRSO: Sanbaloolshe oo shaaciyey sida uu ku yimid go’aankii lagu…
DAAWO: Doorashada Galmudug oo meel xasaasi ah mareysa & dalal…
DEG DEG+FIIRSO: CC Shakuur oo weerar Afka ah ku qaaday Kheyre,Xogta…
DEG DEG: Khilaafka Kheyre & Wasiir Beyle,Halista DF kaga soo…
PROF. YAXYE: “Kaniiniga Viagra ee xoojiya xubinta taranka ragga…
DEG DEG+FIIRSO: Masuq maasuq hareeyay doorashada Galmudug & DF oo…
Sanadguurada 1aad weerarkii Hotelka Dusitd2 (Xaalad layaab leh oo…
DEG DEG+FIIRSO: Dagaal culus oo ka bilowday Dh/mareeb,Qoor Qoor oo is…
DEG DEG+FIIRSO: Muuse Suudi oo fadeexeyay Farmaajo & Kheyre,DENI…
DEG DEG+FIIRSO: Farmaajo oo dalka ka dhoofay,Xaaf oo fowdo bilaabay…
DAAWO: DF oo ku fashilantay iney Qalbi Dhagax keentay Muqdisho &…
DEG DEG: Fahad Yaasin oo Deg Deg ugu baxay Galmudug,Khilaafka Kheyre…
FIIRSO: Xog ka cusub geerida Cali Dheere & Axmed Madoobe oo…
DEG DEG+FIIRSO: Cali Dheere oo la dilay,Shirqoolka Kheyre ee…